“Efa Hitanay ny Mesia!”—Tanteraka Tamin’i Jesosy ve Ireo Faminaniana?
Tanteraka ilay faminaniana nosoratan’i Mika mpaminany momba ny Mesia, 700 taona teo ho eo tatỳ aoriana: Teraka tao Betlehema i Jesosy. Tanteraka tamin’ny taona 29, izany hoe 30 taona taorian’izay, ny tapany voalohany tamin’ny faminanian’i Daniela momba ny Mesia. Natao batisa i Jesosy ary nohosoran’Andriamanitra tamin’ny fanahy masina. Tonga ara-potoana ilay Taranaka, na ilay Mesia nandrasana hatry ny ela!
Nanomboka ny fanompoany avy hatrany i Jesosy, ka “nanambara ny vaovao tsaran’ny fanjakan’Andriamanitra.” (Lioka 8:1) Tsara fanahy sy tena niahy ny hafa izy, araka ny efa nambara mialoha. Nahasoa ny fampianarany sady feno fitiavana. Nositraniny koa ny “karazana kilema rehetra”, ka nasehony fa momba azy Andriamanitra. (Matio 4:23) Nanatona an’i Jesosy daholo na ny kely na ny lehibe, ary vaky vava hoe: “Efa hitanay ny Mesia!”—Jaona 1:41.
Nilaza i Jesosy fa hisy ady, horohoron-tany, ary loza maro hafa eran’izao tontolo izao, alohan’ny hitondrany ny tany. Nampirisika ny olona ‘hiambina hatrany’ àry izy.—Marka 13:37.
Lavorary i Jesosy ary nankatò an’Andriamanitra foana. Nasain’ny fahavalony novonoina anefa izy. Afaka nanolotra sorona lavorary izy rehefa maty, mba hahazoantsika indray izay nafoin’i Adama sy Eva. Izany dia ny fanantenana fiainana mandrakizay ao amin’ny Paradisa.
Tanteraka ny faminaniana rehefa maty i Jesosy ary natsangan’Andriamanitra tamin’ny maty, telo andro taorian’izay. Lasa anjely mahery izy ary niseho tamin’ny mpianany mihoatra ny 500. Talohan’ny niakaran’i Jesosy tany an-danitra, dia nirahiny ny mpianany mba hitory amin’ny “olona any amin’ny firenena rehetra” ny vaovao tsara momba azy sy ny Fanjakany. (Matio 28:19) Vitan’izy ireo tsara ve izany asa izany?
—Miorina amin’ny Matio, Marka, Lioka, Jaona, 1 Korintianina.
Hizara Hizara “Efa Hitanay ny Mesia!”